Home » Lahatsoratra farany farany » Tsindrio eto raha ity ny fanambaranao an-gazety! » Naughty sa Nice? Inona no lisitry ny mpivarotra hipetraka amin'izao fotoana izao?
Betsaka ny zavatra nosoratana momba ny fitakiana fialan-tsasatra amin'ity taona ity. Ny fikarohana fananan'ny Creo Advisors dia manasongadina ireo fironana lehibe izay hanavaka ireo mpivarotra tena faly amin'ireo diso fanantenana amin'ity fotoam-pialan-tsasatra ity. Na dia mihidy aza ny fanapahan-kevitra maro, ny fanatanterahana ny 37 andro farany alohan'ny fialan-tsasatra dia hanana anjara toerana lehibe kokoa noho ny mahazatra noho ny fiantsenan'ny mpanjifa sy ny fanamby amin'ny rojo famatsiana.
Ny tombony lehibe amin'ny fikarohana mpanjifa dia ahitana:
• Tsy nisintona ny fiantsenana amin'ny andro fialantsasatra ny mpanjifa. Raha ny marina, mitatitra ny mpividy fa eo amin'ny 7% eo ho eo ao ambadiky ny haavon'ny fandaniana vs. tamin'ny taon-dasa tamin'ny fiandohan'ny Novambra
• Mety hisy fiantraikany amin'ny fitondran-tena mitarika amin'ny fiovan'ny fandaniana mihoatra ny 60 lavitrisa dolara eo amin'ireo mpivarotra amin'izao vanim-potoanan'ny fialantsasatra izao ny tsy fahampian'ny tahiry.
• Raha mihoatra ny 85% amin'ny mpanjifa no mikasa ny handeha any amin'ny fivarotana iray hiantsenany, dia manantena izy ireo fa ny traikefa dia hanome 4.5 amin'ny 10.
• Ny fiatrehana ny fitakiana tsy manan-tsahala, ny teritery maro, ary ny fanantenana ambany dia mitaky ny haavon'ny fahaiza-manao sy ny fanatanterahana. Na izany aza, ny valisoa dia manan-danja ho an'ny mpivarotra mahomby
Fitakiana sy fotoana fialan-tsasatra
Saika ny famantarana fitakiana rehetra eny an-tsena dia manondro ny fety 'indray mandeha isan-taranaka'. Ao amin'ny fikarohana manokana natao tamin'ny 4-12 Novambra 2021 (N = 2,519), manodidina ny 26% amin'ireo namaly no tsy nanomboka ny fiantsenan'ny fialan-tsasatra tamin'ny fiandohan'ny volana Novambra tamin'ity taona ity raha oharina amin'ny 22% tamin'ny taon-dasa. Amin'ny ankapobeny, ny mpanjifa dia mitatitra fa 7% eo ho eo amin'ny fiantsenan'izy ireo fialantsasatra vita tamin'ity taona ity raha oharina tamin'ny teboka mitovy tamin'ny taon-dasa. “Taona sarotra sy sarotra ho an'ny mpanjifa ity. Ny fiantsenana tara, miaraka amin'ny mpanjifa salama ara-bola, dia naniry ny hankalaza fety mahazatra kokoa, ary ny antony hafa dia hitarika amin'ny fitakiana ambony mandritra ny 5½ herinandro ho avy, ”hoy i Richard Vitaro, Tale Mpitantana, Creo Advisors. Fanampin'izany, ny fanadihadianay dia manasongadina ny safidin'ny media nomerika sy nentim-paharazana manokana, izay azo ampiasaina hanatrarana ny mpanjifa amin'izao vanim-potoana izao.
Olana amin'ny rojo famatsiana sy fahafahana hisambotra ny fangatahana
Mitombo hatrany ny ahiahy manodidina ny rojo famatsiana eran-tany rehefa manomboka mahatsapa ny fiantraikan'ny entana tara amin'ny fialantsasatra manerana ny indostria isika. Araka ny fanadihadianay, ny tsy fahampian'ny famoriam-bola dia hitarika fihodinana manodidina ny 7% amin'ny varotra amin'ity fialantsasatra ity, izay ho azon'ireo mpivarotra manana toeran'ny tahiry matanjaka na afaka mitarika ny mpividy amin'ny safidy azo ekena. Manantena izahay fa mihoatra ny $ 60 B amin'ny fidiram-bola azon'ireo izay manana famatsiam-bola matanjaka, miaraka amin'ireo mpivarotra hafa mety hiatrika famoriam-bola mibontsina aorian'ny fialan-tsasatra rehefa mitohy ny tahiry. Steve Vielmetti, Tale Mpitantana ao amin'ny Creo Advisors, dia nilaza hoe: "Ny mpivarotra sy mpanamboatra izay nanao risika bebe kokoa tamin'ny fananganana mandroso na manana rojo famatsiana bebe kokoa amin'ny fitarihana ny mpanjifa amin'ny safidy azo ekena na mamaly haingana kokoa ny baiko na ny tahiry, dia handresy amin'ity vanim-potoana ity. ” Nanampy i Steve hoe: "Ankoatra ny fialantsasatra, ny orinasa dia tsy maintsy mandroso mankany amin'ny 'rojo famatsiana marani-tsaina' voafaritry ny mpiara-miombon'antoka sy ny fananana, miaraka amin'ny fampiasana fitaovana fandrindrana mandroso izay mampiasa angona toy ny fanadihadiana amin'ny Internet, ny fivezivezena ary ny famantarana ivelany hafa hitondrana fiara. famonoana sy fahakingana amin'ny fotoana tena izy.”
Ny fanadihadiana nataonay dia mampiseho fa maherin'ny 85% ny mpanjifa no mikasa ny hiditra any amin'ny magazay amin'ny ampahany amin'ny diany miantsena amin'ity fialantsasatra ity, saingy somary mafana izy ireo momba ny traikefa. Ho fanampin'izay, nanjary sarotra kokoa ny tontolon'ny fivarotana rehefa mandeha ny fotoana miaraka amin'ny BOPIS, Curbside, protocols Covid, ary antony maro hafa.
Fandresena ny vanim-potoana
Na dia efa maro aza ny fanapahan-kevitra noraisina, ny mpivarotra dia mbola manana fahafahana hitondra vokatra ho an'ny sisa ~ 75% amin'ny varotra fialantsasatra. Ny fanatsarana ny algorithm dizitaly, ny fametrahana dokam-barotra nentim-paharazana, ny firotsahana amin'ny mpanjifa sy ny tsy fivadihana, ny fiantohana ny mpiasan'ny fivarotana sahaza, ary ny fametrahana ny tahiry misy amin'ny fomba stratejika dia hanampy amin'ny fitarihana ny vokatra ambony sy ambany kokoa amin'ity vanim-potoana ity. Ny hetsika toy izany dia azo atao amin'ny fitarihana maingoka, ny fandrindrana ny fandaminana, ny fahaiza-manaony ary ny fanadihadiana. Noho ny fampifangaroana ny fangatahan'ny mpanjifa matanjaka sy ny fanamby amin'ny fitahirizana sy ny mpiasa, ireo mpivarotra izay mahavita tsara amin'ity fialantsasatra ity dia hijinja valisoa lehibe. Ho fanampin'izay, ny fahaizan'ireo mpivarotra apetraka mandritra ity fialantsasatra ity dia hanorina tanjaky ny fandaminana, izay azon'izy ireo ampiasaina amin'ny taona 2022 sy ho avy.